Umdlalo obuwulindele Ukuphefumula Kwasendle 2 - Izindaba Ezintsha
Umdlalo obuwulindele Ukuphefumula Kwasendle 2
Ukubheka Emuva Emphefumulweni Wasendle
Umbuzo Mayelana Nokuphefumula Kwasendle 2
Izinto Ezithokozisayo Oziphothile Nge-Breath of the Wild
UNintendo kulindeleke ukuthi abe nonyaka omuhle kakhulu ngonyaka ozayo. Isibonelo, izokhipha Izinganekwane ze-Pokemon: I-Arceus, i-Pokemon spinoff entsha eqanjwe ngendlela emangalisayo, futhi izobe iqhubeka nomdlalo wayo omncane kodwa onamandla wokudubula nge-Splatoon 3.
I-Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 izokhishwa ngohlelo Nintendo Shintsha esikhathini esithile ngonyaka ozayo, okungenzeka ukuthi yizindaba ezijabulisa kakhulu kuzo zonke. Lo mdlalo uthathe isikhathi eside kakhulu ukufika kunalokho abalandeli abaningi beZelda abebekulindele. I-Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 yembulwa ngesikhathi se-E3 2019, okungase kubonise ukuthi ukulinda kube kude kunalokho obekulindelwe uNintendo. Noma kunjalo, ukulinda kungase kuphele maduze.
Uma ungumuntu othanda i-Rockstar edumile yomdlalo we-GTA ke nazi izindaba zakamuva mayelana I-GTA 6 ukuthi udinga ukuhlola.
Abadlali banikezwa iziyalezo ezincane futhi bavunyelwe ukuhlola umhlaba, ofana nomdlalo wasekuqaleni wango-1986 othi The Legend of Zelda. Ukuqoqa izinto ezahlukahlukene kanye nemishini ukusiza ezinhlosweni ezinjengokuxazulula izindida noma imibuzo eseceleni kungomunye wemisebenzi. Indawo yonke ayihlelekile, ikhuthaza ukuhlola nokuhlola, futhi umgomo oyinhloko wesakhiwo ungenziwa nganoma iyiphi indlela.
I-Breath of the Wild yathuthukiswa phakathi neminyaka emihlanu ukuphendula izicelo zabalandeli zendawo enkulu yemidlalo ochungechungeni. UNintendo usebenzise izici ezifana nendawo evulekile kanye nenjini yefiziksi ebanzi ukuze acabange kabusha izinkambiso zochungechunge. I-Monolith Soft, eyaziwa kakhulu ngomsebenzi wayo emhlabeni ovulekile wemidlalo ye-Xenoblade Chronicles, esizwa ngokuma kwezwe nokuklama kwendawo.
Umdlalo bekumele uphume ngo-2015 njengokhethekile we-Wii U, nokho uhlehliswe kabili. I-Breath of the Wild kwakuwumdlalo wokwethulwa kwe-Nintendo Switch kanye nesihloko sokugcina esishicilelwe yi-Nintendo se-Wii U, esikhishwe ngoMashi 3, 2017. Kuwo wonke u-2017, iphasi yokwandisa ilethe imizuliswano emibili yokuqukethwe okulandekayo.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi abalandeli abakaze basondele ekukhululweni kwe-Breath of the Wild 2, uNintendo akakanikezeli amaqiniso amaningi ayisisekelo. Ngaphandle kokuqagela okujabulisayo mayelana nokuvuka kukaGanondorf ethuneni noma ukubuya kwesibili kukaDemise, abalandeli abaqiniseki ukuthi ukulandisa komdlalo kuyini. Ngaphandle kokwembulwa kwayo kuvidiyo ye-E3 2021 ye-Breath of the Wild 2, okuningi okucacile kwe-gameplay tweaks nezithuthukisi akukaze kuchazwe ngokujulile.
Igama eliqondile lochungechunge lwe-Breath of the Wild alaziwa kubalandeli. Naphezu kwakho konke lokhu kungaqiniseki, abalandeli cishe kuzodingeka balinde izinyanga ezimbalwa ukuze bathole ulwazi olwengeziwe. Njengamanje, iNintendo inokuningi epuleti layo.
Esinye isizathu sokuthi kungani izindaba zingase zithathe isikhathi ukufinyelela abalandeli usuku oluthile lokukhishwa kwe-BotW 2. Ngomqondo oqinile, abalandeli beZelda abazi ukuthi uNintendo uhlela nini ukukhulula umdlalo ngo-2022. Kungenzeka ukuthi kuzothatha unyaka ngaphambi kokuba ikhishwe. Noma ngabe i-Breath of the Wild 2 ingaphumi kuze kube ikota yesithathu noma yesine ka-2022, akubonakali kunengqondo ukuthi uNintendo uzoyishaya indiva ezinye izinyanga eziyisithupha.
I-Breath of the Wild 2 ilandelanisa i-Breath of the Wild, ethathwa kabanzi njengomunye wemidlalo emihle kakhulu ye-Switch yesikhathi sonke, nokho okwamanje asikazi okuningi ngayo, okuhlanganisa usuku lwangempela lokukhishwa kwayo nesihloko sangempela.
Okwamanje, akucaci ukuthi sizosithola nini isibuyekezo sethu esilandelayo, njengoba lo mdlalo ubungekho ekusakazweni kwewebhu okukhulu kweNintendo ngoSepthemba, futhi inkampani ithe izokweqa uMbukiso weMidlalo weTokyo walo nyaka.
I-Breath of the Wild isetha amarekhodi okuthengisa ezimakethe eziningi ngesihloko sokwethulwa kweNintendo. E-Japan, izinguqulo ze-Switch kanye ne-Wii U zithengise isamba samakhophi angu-230,000 evikini labo lokuqala, nenguqulo ye-Switch ibe umdlalo othengiswa kakhulu weviki. I-Breath of the Wild bekuwumdlalo wokudayisa othengwa kakhulu isibili e-UK ngemuva kwe-Horizon Zero Dawn ngesonto lawo lokuqala, kanye nomdlalo wesithathu we-Zelda ohamba phambili ngemuva kwe-Wind Waker ne-Twilight Princess.
Ngomsebenzi wakhe kuzo zonke izihloko ze-Legend of Zelda edlule, u-Koji Kondo ungomunye wabaqambi begeyimu yevidiyo abaziwayo kakhulu. Ubhekene nezindikimba eziyisakhiwo sodumo ezivela ku-Ocarina of Time neminye imidlalo. I-Breath of the Wild, ngakolunye uhlangothi, i-Legend yokuqala yegeyimu ye-Zelda ngaphandle kweminikelo yakhe. Abalandeli bayaxakeka ukuthi kungani engekho kulo mdlalo. Kungenzeka ukuthi uNintendo wayefisa umculo opholile futhi othule, ngokombono owodwa. Izwi elidlala ku-Breath of the Wild kwaba yisinyathelo esikhulu esiya phambili. Sasisenokulandelana lapho abanye abalingisi bekwazi ukukhuluma ngokuzwakalayo, noma ngabe i-Link isengumlingiswa oyisimungulu. Umlingisi wezwi wesiNgisi kaZelda ku-Breath of the Wild kwakunguPatricia Summersett. Ungumlingisi nomculi wase-United States. Akayena owaseBrithani, ngokuqinisekile. Ngenkathi uZelda enezwi elihle laseBrithani elisezingeni eliphezulu, umlingisi wezwi akanayo ngokwemvelo leyo nkulumo. I-Breath of the Wild bekufanele ibe ku-Wii U ngaphambi kokuthi uNintendo akhethe ukuyikhulula ku-Nintendo Switch entsha necwebezelayo. Eqinisweni, ngenkathi beklama i-Sheikah Slate, babecabanga nge-Wii U Gamepad.
USatoru Iwata, umongameli wesine kaNintendo kanye ne-CEO, ushone ngo-2015 eneminyaka engu-55 ngenxa yezinkinga ezihlobene nesimila. Uthole inani lemiklomelo yemidlalo yevidiyo. I-Satori Mountain enhle e-Breath of the Wild ingenye edume kakhulu. Ukuphakama akuqanjwa ngaye kuphela, kodwa futhi kungenye yezindawo ezinhle kakhulu kulo mdlalo.
Umphetho Waphakade: Ifuneka Ngekhonsoli ngo-2022 Futhi Izofika Nama-Voiceovers aseJapan!